Habka xakamaynta kombiyuutarka waxaa lagu soo koobi karaa saddex tallaabo: helidda xogta waqtiga-dhabta ah, go'aan-qaadasho waqtiga-dhabta ah iyo xakamaynta waqtiga-dhabta ah.
Sababtoo ah horumarinta tiknoolajiyadda kombiyuutarka, tiknoolajiyadda xakamaynta, farsamayaqaannada isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda sawirka, adeegsiga tikniyoolajiyadda xakamaynta microcomputer ee xakamaynta tooska ah ee qaboojiyaha iyo qaboojiyaha ayaa noqday mid aad iyo aad u badan. Ka dib markii nidaamka kontoroolka dhaqanka lagu soo daro microcomputer -ka, wuxuu si buuxda u adeegsan karaa hawlgalada xisaabta ee kombiyuutarka, hawlgalada macquulka ah iyo shaqooyinka xusuusta, wuxuuna u adeegsan karaa nidaamka waxbaridda microcomputer -ka si uu isugu diyaariyo softiweerka waafaqsan sharciga xakamaynta. Microcomputer -ku wuxuu fuliyaa barnaamijyadan si uu u xaqiijiyo xakamaynta iyo maaraynta xuduudaha la kontoroolo, sida helidda xogta iyo ka shaqaynta xogta.
Habka xakamaynta kombiyuutarka waxaa lagu soo koobi karaa saddex tallaabo: helidda xogta waqtiga-dhabta ah, go'aan-qaadasho waqtiga-dhabta ah iyo xakamaynta waqtiga-dhabta ah. Ku -celcelinta joogtada ah ee saddexdaa tallaabo waxay awood u siinaysaa in nidaamka oo dhan la xakameeyo oo la hagaajiyo si waafaqsan sharciga la siiyey. Isla mar ahaantaana, waxay sidoo kale la socotaa doorsoomayaasha la kontoroolo iyo xaaladda hawlgalka qalabka, ciladaha, iwm, waxay xaddidaan digniinta iyo ilaalinta, waxayna diiwaangeliyaan xogta taariikhiga ah.
Waa in la sheegaa in koontaroolka kombiyuutarka marka la eego hawlaha xakamaynta sida saxnaanta, waqtiga-dhabta ah, isku-halaynta, iwm. Waxaa ka sii muhiimsan, kor u qaadista hawlaha maareynta (sida maareynta qaylo -dhaanta, diiwaanada taariikheed, iwm.) Oo ay keeneen soo -gelinta kombiyuutarrada ayaa ka baxsan kuwa kontoroolada analogga ah. Sidaa darteed, sanadihii la soo dhaafay, iyadoo la adeegsanayo koontaroolka tooska ah ee qaboojiyaha iyo qaboojiyaha, gaar ahaan koontaroolka tooska ah ee nidaamyada qaboojiyaha waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ah, koontaroolka kombiyuutarku wuxuu ahaa mid xukuma.
Hore: Aaladda Analog si otomaatig ah u xakamee
Xiga: Nidaamka xakamaynta alaarmiga dabka
Nidaamka Koontaroolka Kombiyuutarka ， Noocyada Nidaamyada Korantada Korantada ond Qaboojinta Hawada United ond Qaboojiyaha Nidaamka Kontoroolka Tooska ah ， Hawada Hawada ee United
Aaladda Analog si otomaatig ah u xakamee
Nidaamka Biyaha Qaboojiyay, Sifaynta Unugga Hawada Cusub, Qolka Nadiifka ah, Daaqadda Qolka Nadiifinta Qolka, Qaboojiyaha Hawada Qolka nadiifka ah, Daaqadda Qolka nadiifka ah,